You can investigate our all courses here. ပို့ချမည့် ဘာသာရပ်များ အတန်းများကို ဒီကနေ အသေးစိပ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Please click here to apply for student application. ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် လျှောက်လွှာတင်ဖို့ ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ။
Please click here by to contact us for your visit. ကျောင်းသို့ လာရောက် လာပါတ်လည်ရန် ဒီနေရာကနေ ဆက်သွယ်ပါ။
Daw Hla Hla Myint (B.Ed) is the deputy principal of the school. She is also retired division educational administrator.
ဒီကျောင်းကြီးရဲ့ တာဝန်ခံ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကတော့ ဒေါ်လှလှမြင့် (B.Ed) ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးက ခရိုင်ပညာရေးမှူး(ငြိမ်း) လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Since 1993, because of student's parents and students desire, school had been founded at Shwe Dagon Pagoda street.
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကျောင်းသား မိဘများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ လည်းကောင်း၊ ရပ်ဝေးရပ်နီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများ၏
ပြင်းပြလှသော ဆန္ဒအရ လည်းကောင်း ဘာသာစုံ သင်ကြားသော
သိကောင်းစရာများ | About School
ဒီကျောင်းရဲ့ နာမည်ဟာ " ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင် ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်းနှင့် စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ရေး အဆင့်မြင့်ဘော်ဒါ" ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းရဲ့နာမည်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ပဲ ဆရာကြီး ဂုဏ်ထူးဦးသိန်းနိုင်ကိုယ်တိုင် တည်ထောင်တာလဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကြပ် သင်ကြားပို့ချရာ ကျောင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ DG (Director General) လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားရေး ကမ္ဘာမှာ နှစ်ပေါင်း (၆၀) တိုင်တိုင် အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ိဇ္ဇာတန်းစဉ် မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူး၊ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာစာပေ ချစ်မြတ်နိုးသူများ အသင်းကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပန်းတိုင်ပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ နာယက၊ အမျိုးသားစာပေ နှစ်ဆုရ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ် စာရေးဆရာအသင်းရဲ့ နာယက၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်သေးပညာအသင်းကြီး နာယက၊ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာရပ်သင် ဆရာများအသင်းကြီးရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယက၊ အမျိုးသားစာပေဆု ရွေးချယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်၊ အကန်တော့ခံ သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးရှင်တွေ သောင်းချီပြီး ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးရှင်တွေ ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ Top Ten စာရင်းဝင်တွေ ရာချီပြီး ဖွားမြောက်သန့်စင်ခဲ့သူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
School name is "Gon Duu U Thein Naing" Private high school and school camp.
Just looking the school name, it is obvious that Myanmar Sar Saya Gon Duu U thien Naing founded. He is also DG( Director General). He is man of over 60 years-teaching experience. He isachairman of " Myanmar subject beloved association". General advisor of " Yote Taee" , " freedom private subject teacher association" ," Pan Daing Education foundation", " National book awarder association of kyauthada township".
He is also participant member of "Elder National book lecture adwarder association". U Thein Naing already trained over hundred thousands of Myanmar subject -distinctions